We.com.mm - ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ရမယ့် ဓာတ်ပုံ ( ၂၀ )
ကမ္ဘာကြီးဟာ ကျဉ်းကျဉ်းလေးပါ တဲ့ …။ လက်ခံသလား ..။
သင့်ဘဝတစ်သက်တာမှာ ( ကလေးဘဝကနေစပြီး အခုအချိန်ထိ ) မြင်ဖူး .. တွေ့ဖူးတဲ့အရာ .. အတွေ့အကြုံတွေ အများကြီးရှိကောင်းရှိခဲ့လိမ့်မယ် …။ ဒါပေမယ့် မြင်ဖူးတိုင်း ကြုံဖူးတိုင်း ငါ့အတွက် လုံလောက်မှုရှိပြီလို့ထင်သလား ..။
တကယ်တော့ ကမ္ဘာကြီးဟာ ကျွန်တော်တို့ မျက်စိတစ်ဆုံးကြည့်ဖို့ ….၊ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် လေ့လာဖို့အတွက် ကြီးမားလွန်းတယ် မဟုတ်လား ….။
( 1 ) Corpse Plant
လူတိုင်းသိကြတယ် ..။ အဲဒီအပင်အကြောင်းလည်း facebook မှာ ပျံ့နှံ့ဖူးတာ ၂၀၁၀ ထဲကဆိုတော့ကြာပေါ့။ အဲဒီအပင်ဟာ လက်တင်အမေရိက မှာအများဆုံးပေါက်ရောက်ပြီး သူ့ရဲ့မူရင်းအခေါ်က #Misshapen Penis ဖြစ်တယ် ..။ မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ ပုံပျက်ပန်းပျက်ဟိုဒင်း ပေါ့လေ ..။ သူ့ရဲ့အနံ့ကတော့ ပုတ်အဲ့အဲ့အနံ့ရှိပါတယ် ..။
(2) Ammolite
မြေလွှာအောက်မှာ ပြင်းထန်တဲ့ အပူချိန်ဖိနှိပ်ခံရပြီး ကျောက်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ သတ္တုတွေအများကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် သစ်ပင်ကနေ ကျောက်အဖြစ်ပြောင်းသွားတာဆိုရင်တော့ ပယင်းပဲရှိတယ် ..။ အဲဒီလို သစ်ပင်၊ သစ်စေးတွေကနေ ကျောက်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အရာကို organic gemstone လို့ခေါ်တယ် ..။
အခုမြင်ရတဲ့ အရာလေးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်းများစွာက ဆိုက်ပရပ်စ်ပင်စည် ကနေ ကျောက်အဖြစ်ပြောင်းသွားတဲ့ organic gemstone တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာမှာ ပထမဆုံး ဆိုက်ပရပ်စ် organic gemstone လည်းဖြစ်ပါတယ် ..။
(3) Bird View from the top of Mt. Everest
ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး ဧဝရက်တောင်ထိပ်ကနေ အောက်ကိုငုံ့ကြည့်ရတဲ့ အရသာ ..၊ ဘယ်လိုအရာနဲ့များ လဲနိုင်မှာတဲ့လဲ ..။ သင်ဟာ အမြင့်ဆုံး …၊ အရာအားလုံးဟာ သင့်ခြေဖဝါးအောက်မှာ …။
(4) Lightning Struck
ဂေါက်ကွင်း မြက်ခင်းပြင်ကို မိုးကြိုးထိမှန်ပြီးတဲ့နောက် ….။
(5) Zenith Walkway
ကောင်းကင်ကြိုးတန်းပေါ်က စွန့်စွန့်စားစား လမ်းလျှောက်သူတစ်ယောက်ရဲ့ အပေါ်စီးမြင်ကွင်း …။
(6) A 3D Cast Ultrasound Technology
ဒါဟာ အောင်မြင်လုနီးနီး အနာဂတ်အိပ်မက်တွေထဲက တစ်ခုပါ ..။ ကွဲပြဲသွားတဲ့ ဒဏ်ရာတွေ ..၊ အရေပြားပေါ်က ထိခိုက်ရှနာတွေ နဲ့ အရိုးကျိုးတာတွေကိုပါ ဒီနည်းပညာနဲ့ သုံးနာရီအတွင်း ကုသနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် ..။
(7) Icy Water and Frozen River
စိန်ပွင့်တွေစီထားသလားအောက်မေ့ရတဲ့ ရုရှားနိုင်ငံ ဘိုင်ကိုနူးဒေသက ဆောင်းရာသီ ရေခဲမြစ်တစ်ခု ပါ။
( 8 ) Flying Fish
ငါးပျံတွေဟာ အတ္တလန်တစ် သမုဒ္ဒရာထဲမှာသာ ကျက်စားကြတဲ့ ငါးတစ်မျိုးဖြစ်တယ် ..။ သူတို့ကို အဝေးက မြင်နိုင်ပေမယ့် အနီးကပ်ကြည့်ဖို့ကတော့ အတော်ကို ခဲယဉ်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါ ..။
(9) Manhattan Today
လူတွေဖန်တီးထားတဲ့ ယနေ့ခေတ် မန်းဟတ်တန်မြို့ နဲ့ …၊ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ ခန့်က မန်းဟတ်တန် ဘယ်လိုကွာခြားသလဲ ..။ အနည်းဆုံးကတော့ တစ်ခုလိုချင် တစ်ခုစွန့်လွှတ်ရမှာ သဘာဝပဲမဟုတ်လား ..။
( 10 ) Meteorite
ဥက္ကာခဲတစ်ခု #Mackinac Island 1957# ရဲ့ အတွင်းပိုင်း ဖွဲ့စည်းပုံ …။ အမျိုးအမည်မသိ ရှားပါးသတ္တုတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့အပြင် ပယင်းရောင်ထနေတဲ့ အလှတရားကို ပါတွေ့ရမယ် ..။
( 11 ) Atlantic Ocean Road
ဆောင်းဦးရာသီ လှိုင်းထန်ချိန် …၊ မုန်တိုင်းကျချိန်ဆိုရင်တော့ ဘယ်သက်ရှိအရာကမှ တံတားပေါ်ကဖြတ်မသွားရဲလောက်အောင် အန္တရာယ်များလွန်းတဲ့ ကမ်းရိုးတန်းဖြတ်လမ်းတံတား ပါ ..။
( 12 ) Color and Layering
သလင်းကျောက်နဲ့ ကြွေထည်တို့ရဲ့ မင်သက်လောက်စရာ အနုပညာပေါင်းစပ်မှုတစ်ခု ..။
( 13 ) A Royal Tiara
တော်ဝင် စိန်စီ သရဖူ …၊ အဲလီဇဘက်ဘုရင်မကြီးရဲ့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ရတနာပစ္စည်းတွေထဲက တစ်ခုပါ ..။
( 14 ) Standing High
သစ်ပင်ပေါ်က သစ်သီးလေးတစ်လုံးစားချင်လွန်းလို့ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ခူးနေတဲ့ ဆင်တစ်ကောင်ရဲ့ပုံရိပ် ..။ အဲဒီပုံလေးဟာ ၂၀၁၂ လောက်က #အာဖရိကအလယ်ပိုင်း# မှာရိုက်ယူထားခဲ့တဲ့ပုံဖြစ်တယ် ..။
( 15 ) The Famous Grave Compilation Watch
ကြေးဝါနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဒီနာရီဟာ နေဝင်ချိန်၊ နေထွက်ချိန်၊ နက္ခတ်တာရာတွေရဲ့သွားလမ်းကြောင်းတွေ တစ်စက္ကန့်ရဲ့ ဘယ်နှစ်ပုံကအစ တွက်ထုတ်ပေးတဲ့ Equation feature တွေကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရှုပ်ထွေးဆုံး တည်ဆောက်နည်းရှိတဲ့ နာရီတစ်လုံးအဖြစ်နာမည်ကြီးပါတယ် ..။ သူ့ကို ၁၉၅၂ ကာလကတည်းက ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ် ..။
( 16 ) Cross Section
ခရီးသည်တင် လေယာဉ်တစ်စီးကို ကန့်လန့်ဖြတ်ပိုင်း လိုက်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမြင်ရမလဲ ..?
( 17 ) Chinese Latern
#ဂန္ဓာလရာဇ်မီးအိမ် တဲ့ …။ အဲဒီပန်းပွင့်ဟာ ဆောင်းဦးမှာ ပွင့်ဖူးပြီး နွေဦးရာသီမှာတော့ ခြောက်သွေ့သွားတတ်တယ် ..။
( 18 ) Neuschwanstein Castle, Bavaria, Germany
Sleeping Beauty ကာတွန်းကားလေးထဲက မင်းသမီးလေးရဲ့ ရဲတိုက်ဟာ ဂျာမနီနိုင်ငံ ဘာဗာရီးယားဒေသ က နူချန်စတိန်း ရဲတိုက်ကို အခြေခံလို့ ဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ် ..။ အပြင်လောက မှာလည်းနူချန်စတိန်းရဲတိုက် ကို နတ်သမီးပုံပြင်တွေထဲက ရဲတိုက်လို့ လူသိများကြပါတယ် ..။
နောက်ပြီး အဲဒီရဲတိုက်ဟာ ဘာဗားရီးယား ဒေသက နယ်စား လဖ်ဒွစ်ချ် ၂ အတွက်တည်ဆောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ် ..။
( 19 ) Mont Saint Michael
Disney အနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတွေရဲ့ landmark တွေအတွက် မူပိုင်ခွင့်ကြေးတွေ ပေးသင့်နေပြီထင်တယ် ..။
Tangled ဇာတ်ကားထဲက Corona မင်းနေပြည်တော်ဟာ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ နော်မန်ဒီဒေသ က စိန့်မိုက်ကယ် ကျွန်းပေါ်က ဘုရားကျောင်းအိုလေးကို အခြေခံလို့ရေးဆွဲထားတာဖြစ်တယ်။ ရေလယ်မှာ ထီးထီးကြီးရှိနေပေမယ့် ဒီရေအတက်အကျ၊ မုန်တိုင်း နဲ့ ဆားပါတဲ့ လေဒဏ်တွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိတာကိုက ဘုရားကျောင်းရဲ့ထူးခြားချက်ဖြစ်ပါတယ် ..။
( 20 ) Wulong Karst : The Valley of Destiny
တရုတ်နိုင်ငံ ဝူလင်ခရိုင်၊ ချုံကင်း မြို့အလွန်မှာတည်ရှိတဲ့ ဒီတောင်ကြားကို ဒေသခံတွေကတော့ ကံကြမ္မာတောင်ကြားဒေသလို့ခေါ်တယ် …။
ဘာဖြစ်လို့အဲဒီလိုခေါ်လည်းဆိုတာမသိရပေမယ့် #မြင့်မားတဲ့တောင်နှစ်လုံးကြားမှာတည်ရှိနေတဲ့ အပြင် အပေါ်ကနေ ရုတ်တရက် ကျောက်တုံးကျောက်ဆိုင်တွေ ပြိုကျလာတဲ့ အခါ ကိုယ့်ကံကြမ္မာ ကဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်မလဲ# ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်လို့ထင်မိပါတယ် ..။
မဝတ်တော့တဲ့ဆွယ်တာတစ်ထည်ကိုပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရမယ့်နည်းလမ်း (၅) မျိုး
မြန်မာရုပ်ရှင်တွေက ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ message တစ်ခုခုကို အမှန်တကယ်ပေးနိုင်ရဲ့လား ?